Dad lagu khasbey in la dhufaano oo magdhow la siinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda ayaa soo jeedisey in qof walba dadkaas dhufaanka lagu khasbey ka mid ah la siiyo 225 000 oo karoon oo magdhow ah. sawir: JACK MIKRUT
Dad lagu khasbey in la dhufaano oo magdhow la siinayo
La daabacay torsdag 9 november 2017 kl 09.46
Boqolaal qof oo horey loogu khasbey in la dhufaano ka dib markii ey jinsigooda badaleen ayaa dalkaan Sweden wuxuu sanadka soo socda siin doonaa magdhaw.
Dawladda ayaa soo jeedisey in qof walba dadkaas dhufaanka lagu khasbey ka mid ah la siiyo 225 000 oo karoon oo magdhow ah.
Wasiirka arrimaha bulshada Annika Strandhäll ayaa sheegtey in dawladdu aaminsan tahay in ey qalad aheyd in dadkaas dhufaanka lagu khasbo, waana sababta aanu mawqifkaas adag ee arrinkaas ka soo horjeeda hadda u qaadaney, waan ognahay in qofka arrinkaas lagu sameyey aysan lacag la siiyaa hadda waxba u soo celineyn haddana sidaas oo tahay tani waa mid loola jeedo in qaladaadkii dhacey lagu saxo ayey tiri Annika Strandhäll oo ah wasiirka arrimaha bulshada.
Ururka dadka khaniisiinta ah, kuwa ragga iyo dumarkaba u galmooda iyo kuwa jinsigooda badashey (RFSL) ayaa soo jeediyey in magdhowga dadkaas la siinayo la gaarsiiyo ilaa iyo 535 000 oo karoon qofkiiba.
Ururka RFSL ayaa sidoo kale dalbadey in dawladdu ey raaligalin cad ka bixiso arrinkaas dhufaanka khasabka ah la xiriira.
Sharciga cusub ee arrinkaas magdhowga ku saabsan ayaa wuxuu dalkaan ka dhaqangali doonaa 1-da bisha may ee sanadka soo socda, dadkaas dhufaanka horey loogu sameeyeyna waxay heystaan muddo laba sano ah gudohood in ey magdhowgaas ku dalbadaan.